बेबिलोनमा छँदा दानियलले परमेश्वरको राज्यबारे भविष्यवाणी गरे | बाइबल सन्देश
दानिएल परमेश्वरको राज्य र मसीहको आगमनबारे भविष्यवाणी गर्छन्‌। बेबिलोनको पतन हुन्छ
उल्लेखनीय सत्यनिष्ठा भएका दानिएललाई यरूशलेमको विनाशअघि बेबिलोनमा कैदी बनाएर लगिएको थियो। पराजित राज्य यहूदाबाट कैदी बनाएर लगिएका तिनी र अन्य केही यहूदीहरूलाई त्यहाँ केही हदसम्म स्वतन्त्रता दिइएको थियो। बेबिलोनमा बिताएको लामो समय अवधिमा परमेश्वरले दानिएललाई धेरै आशिष्‌ दिनुभयो। यहाँसम्म कि सिंहको खोरमा फालिंदा समेत मृत्युको मुखबाट बचाउनुभयो र धेरै पछि हुने कुराको दर्शन दिनुभयो। दानिएलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणी मसीह र तिनको शासनमा केन्द्रित थियो।
दानिएल मसीह देखा पर्ने समय थाह पाउँछन्‌। परमेश्वरका जनहरूले “एक अभिषेक जन” अर्थात्‌ मसीह कहिले देखा पर्ने आशा गर्न सक्छन्‌ भनी दानिएललाई बताइयो। मसीह देखा पर्ने त्यो समय थियो: यरूशलेमको पर्खाल पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न आज्ञा दिइएको ६९ “हप्ता”-पछि। त्यो “हप्ता” सात दिन भएको साधारण हप्ता होइन तर भविष्यसूचक अर्थमा सात वर्ष हो। त्यस आज्ञा दानिएलको समयभन्दा धेरै पछि दिइएको थियो अर्थात्‌ ई.पू. ४५५ मा। त्यसबेलादेखि सुरु भएर ६९ “हप्ता” ४८३ वर्षसम्म रह्यो र इ.सं. २९ मा आएर अन्त भयो। यस वर्ष के भयो यसपछिको भागमा हेर्नेछौं। पापको प्रायश्‍चितको निम्ति मसीह “हटाइनेछन्‌” अर्थात्‌ मारिनेछन्‌ भनेर पनि दानिएलले दर्शनमा देखे।—दानिएल ९:२४-२६.
मसीह स्वर्गमा राजा बन्नेछन्‌। स्वर्ग नै देखाइएको विशेष दर्शनमा दानिएलले “मानिसका पुत्रजस्तै कोही” भनी संकेत गरिएको मसीह यहोवाको सिंहासनसामु आएको देखे। यहोवाले तिनलाई “सर्वाधिकार, महिमा र राज्याधिकार” दिनुभयो। त्यो राज्य सदासर्वदा रहने थियो। दानिएलले त्यो मसीही राज्यबारे अर्को एउटा रोमाञ्चकारी कुरा थाह पाए। त्यो थियो: राजाले शासन गर्दा तिनलाई साथ दिने अरू पनि हुनेछन्‌। साथ दिने त्यस समूहलाई “सर्वोच्चका पवित्र जनहरू” भनी संकेत गरिएको छ।—दानिएल ७:१३, १४, २७.
त्यस राज्यले यस संसारका सरकारहरूलाई नाश गर्नेछ। परमेश्वरले दानिएललाई बेबिलोनका राजा नबूकदनेसर रनभुल्लमा परिरहेको सपनाको अर्थ खुलाउने क्षमता दिनुभयो। ती राजाले सपनामा एउटा यस्तो ठूलो मूर्ति देखे जसको टाउको सुनका, छाती र हातहरू चाँदीका, पेट र फिला तामाका, गोडाहरू फलामका र पैतालाहरू केही फलामका र केही माटाका थिए। पहराबाट फोरेर आएको ढुङ्गा कमजोर पैतालामा लाग्यो र त्यो मूर्तिलाई चक्नाचूर पारिदियो। मूर्तिका ती भागहरूले क्रमिक रूपमा देखा पर्ने विश्वशक्तिहरूलाई चित्रण गर्छ भनी दानिएलले बताए। पहिलो विश्वशक्ति सुनको टाउकोले चित्रण गर्ने बेबिलोन थियो। यस दुष्ट संसारमा अन्तिम विश्वशक्तिले शासन गर्दा परमेश्वरको राज्यले कदम चाल्नेछ भनी दानिएलले दर्शनमा देखे। त्यो राज्यले यस संसारका सबै सरकारलाई नाश गर्नेछ। त्यसपछि यस राज्यले सदासर्वदा शासन गर्नेछ।—दानिएल अध्याय २.
एकदमै वृद्ध भइसकेका दानिएलले बेबिलोनको पतन भएको देखे। भविष्यवक्ताहरूले भनेझैं राजा कोरेसले त्यो सहरलाई हराए। त्यसको केही समयपछि अन्ततः यहूदीहरू निर्वासनबाट छुटे—भविष्यवाणीमा भनिएझैं जन्मभूमि ७० वर्षसम्म उजाड रहेपछि। विश्वासी राज्यपाल, पूजाहारी अनि भविष्यवक्ताहरूको डोऱ्याइमा यहूदीहरूले अन्ततः यरूशलेमको पुनर्निर्माण र यहोवाको मन्दिरको पुनर्स्थापना गरे। तर ४८३ वर्ष बितेपछि के हुने थियो?
— दानिएलको पुस्तकमा आधारित।
दानिएलले मसीह र परमेश्वरको राज्यबारे के थाह पाए?
परमेश्वरको राज्यले यस संसारका सरकारहरूलाई के गर्नेछ?
तपाईंलाई यसको जवाफ थाह छ भने के तपाईं यसबारे बाइबलबाटै अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ?